तिमी नहुँदा … | शहरबाट शब्दहरु
« नागरिक जल्दा… भाग १
समाहित हुन देऊ ! »
असार २८, जुलाई १२
झरि परिरह्यो मन थामिदैन आँसु
किन भन्छ निर्माहीलाई मनमनै मेरी मायालु
निकै महिनाको समयपछि उनी फेरि टाढिइन् । म प्राय लेख्थे उही निष्ठुरी समय हो । जुन मिलन र विछोडका अध्यायहरुमा आफुलाई अग्रगतिमा प्रस्तुत गरिरहन्छ । रातभरको विश्वकपको मोहका कारण मनमा भएका विछोडका आत्मिय शब्दहरु गुम्सिए । केही पनि खुलेनन् ।
हाम्रो बिछोड नियती होइन । यो समाजमा हुने गतिविधिका कारक हुन् । बिहान कलंकीमा तीन मुटु छोडेर फर्किदा बाटोभर मन चिसिएको थियो । घरमा पुगे उक्लिए कोठातिर । शून्य मात्रै शून्य । म क्षणभरको बिछोडमा उनीलाई दुर नहुन आग्रह गर्दे बोलाइरहेको थिए ।
आऊ मिठो बात गर…
रात त्यसै ढल्किदैछ
भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ
साँझको झरीमा उनी याद बनेर बर्षिरहिन् । उफ् यो बिछोड…केही दिनको दुर हुने प्रकि्यामा यति मुटु दुख्छ भने प्रेमका कहानीमा अन्तिम कथा बिछोडको शब्दले समाप्त भयो भने कस्तो होला ? पलपल यही कुराहरु आइरहे । अनि पुराना बिछोडका यादहरु पनि एक्कासी ठोक्किदै आँखामा झरीको रुप लिँदै थियो ।
मेरा आँखा अझै खुलेको छ
This entry was posted on जुलाई 13, 2010 at 2:52 बिहान and is filed under म र मेरो कुरा. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.
One Comment on “तिमी नहुँदा …”
जुलाई 14, 2010 at 5:11 बिहान
nice one like it …fel cha kunai yesma